Hlaziya iApple Watch yakho ngezi zinto zintsha zewatchOS 3 (II) | IPhone iindaba
Phantse inyanga ngoku, i-watchOS 3 izise iindaba ezininzi kwi-Apple Watch. Inyani yile yokuba ukuba siyalwazi kwaye silusebenzise ngokupheleleyo lonke olu tshintsho nemisebenzi emitsha, isizukulwane sethu sokuqala iApple Watch encinci, okanye akukho nto, kuya kufuneka sikhweletele iApple Watch Series 1 kunye no-2.
Kulo Inxalenye yokuqala yesi sikhokelo Sele sikubonisa iimfihlelo ezincinci ezinje ngokunqumama okuzenzekelayo kuqeqesho, indawo esemgangathweni enezona zicelo zisetyenziswayo, okanye iziko lolawulo elitsha, phakathi kwabanye. Namhlanje siphela ngeengcebiso ezimbalwa ongenakuphulukana nazo.
1 Vula iMac yakho ngokuzenzekelayo kwi-Apple Watch yakho
2 Yenza i-Apple Watch yakho ngokwezifiso ngobuso obutsha
3 Guqula kwaye wenze ngokwezifiso umgangatho wakho wangoku
4 Uqeqesho loMsebenzisi weWheelchair
5 Ukusebenza kwakho, uhlala ubona
6 Khetha indlela yokujonga idatha yoqeqesho
7 Thatha umoya
8 Yongeza umfowunelwa ongxamisekileyo
Vula iMac yakho ngokuzenzekelayo kwi-Apple Watch yakho
Umsebenzi obanzi owaziwa ngokuba yi-Continuity uhambe inyathelo eliya phambili ngokufika kweMacOS Sierra kunye ne-watchOS 3. Ngoku ungasebenzisa iwotshi yakho yeapile ukuvula iMac yakho ngaphandle kokufaka iphasiwedi.
Ukwenza oku kwenzeke, kuqala qiniseka ukuba zombini izixhobo zixhunyiwe phantsi kweakhawunti efanayo ye-iCloud, kwaye wenze ukuba kudlule iqhosha lokungena kwi-Apple Watch yakho ukuba awukabikho.
Kwikhompyuter yakho ye-Mac, landela umendo > Ukukhethwa kweNkqubo> Ukhuseleko kunye nokuBucala> Ngokubanzi kwaye wenze umsebenzi okuvumela ukuba uvule iMac kwewotshi. Ukongeza koku, kuya kufuneka uhlangane nenye imfuno esiza kuyichaza ngakumbi apha.
Yenza i-Apple Watch yakho ngokwezifiso ngobuso obutsha
iwotsOS 3 ifika ikhatshwa ukucofa okutsha kwi-Apple Watch yakho, Ukuba ngumda woMsebenzi yenye yezona zinomdla kwaye ziluncedo.
Ungadibanisa onke amanqanaba owafunayo kwi-Apple Watch yakho kwi-app yewotshi kwi-iPhone yakho; Ungasusa okanye uhlengahlengise indlela ubuso obuvela ngayo ekubukeni kwakho ngokucofa iqhosha lokuHlela phantsi koJonga kwam> Ubuso bam kwiapps ye-iOS.
Guqula kwaye wenze ngokwezifiso umgangatho wakho wangoku
Ukutshintsha inqanaba, ngokulula njenge Slayida umnwe wakho kwiscreen ukusuka ngasekhohlo uye ekunene okanye ngokuchaseneyo, kwaye uya kubona zonke iinkalo ozigcwalisileyo.
Xa ufuna ukwenza ngokwezifiso iingxaki kunye nenye yazo, sebenzisa i-Force Touch ngokucinezela ngokuqinileyo kwiscreen (njengangaphambili).
Uqeqesho loMsebenzisi weWheelchair
Le yenye yezo zinto zithethelela ubukho be-Apple Watch kuba ngoku, I-watchOS 3 iyakwazi ukubona ukusebenza xa umsebenzisi esebenzisa isitulo esinamavili. Ukwenza oku, yiya kwi-app yewotshi kwi-iPhone yakho nakwindlela endijongayo -> EzeMpilo -> Isitulo esinamavili onokulisebenzisa. Olu tshintsho luya kuchaphazela zombini uQeqesho lweapp kunye nomsebenzi woSetyenziso. Okwangoku kukho uqeqesho olwenziweyo olenzelwe abasebenzisi isitulo esinamavili.
Ukusebenza kwakho, uhlala ubona
NgewatchOS 3 ungasebenzisa ukusebenza njengengxaki yobuso bewotshi. Ukuthinta ubunzima obutsha ngokukhawuleza kusungula i-App Workout, kunye nenketho entsha yokuqalisa ngokukhawuleza ikuvumela ukuba uqale usebenzise imithambo ngoko nangoko, ngaphandle kokubeka injongo.
Khetha indlela yokujonga idatha yoqeqesho
I-watchOS 3 ikunika ngoku zonke iimitha zokuzilolonga kwakho kwiscreen esinye, ngokuqinisekileyo ikhululeke ngakumbi. Nangona kunjalo, ukuba ukhetha, ungabuyela kwimowudi yangaphambili ebonisa uhlobo lwedatha kwiscreen. Kuya kufuneka uye kwi-app yokubukela kwi-iPhone yakho kwaye, kwicandelo loQeqesho, khetha i-metric enye endaweni ye-multiple.
Inkqubo entsha Ukuphefumla kukukhokela ngeeseshoni zokuphumla, Ilungele la maxesha oxinzelelo. Ukusuka kwiApple yeApple kwi-iPhone yakho unokukhetha amaxesha oza kukhunjuzwa ngawo ukuba "uthathe umoya" kunye nenani lokuphefumla ngomzuzu apho uziva ukhululekile. Unokuseta Ukuphefumla ukukukhokele xa ungcangcazela.
Yongeza umfowunelwa ongxamisekileyo
Ukubamba iqhosha elisecaleni kwi-Apple Watch yakho kuya kuqalisa umnxeba ongxamisekileyo. Unokongeza ukuya kuthi ga kwabafowunelwa abathathu kwicandelo elihambelana neapp kwi-iPhone yakho kwaye iwotshi yakho iya kwabelana ngemephu yendawo okuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Hlaziya iApple Watch yakho ngezi zinto zintsha zewatchOS 3 (II)